Geesiyaynta gabdhaha – Kaasho Maanka
Hablaha waxaa loo diyaariyaa markay yar yihiin inay ka fogaadaan caqabadahaa iyo dhibaatooyinka nolosha, waxaa loo sheegaa inay qoslaan, si nabad ah wax ku xalliyaan, waxbarashada ay si xeeladaysan u wataan oo dhibco fiican keenaan. Dhanka kale, wiilasha waxaa la baraa inay adkaysi yeeshaan, inay dhibaatooyinka u dhabar adaygaan, xitaa kubbadda inay si aan naxariisi ku jirin u ciyaaraan oo geed yar iyo geed dheerba ka boodaan. Waxaas oo dhan waxaa loo samaynayaa si marka ay qaangaadhaan u noqdaan rag gorgortama oo xataa markay shukaansi samaynayaan libaaxeeya diyaarna u ah inuu laabta u dhigto garnayl kasta oo lagu soo gano.
Dadka kasmanafeedka yaqaanaa waxay caddeeyaan inaan qofna dhegta kuu raaricinayn haddaanad ka talaabsan jalaafooyin badan oo ka mid ah caqabadaha nolosha; ugu yaraan waa inaad haystaa laba guuldarrooyin oo aad inta afka ciidda dartay haddana ka kacday oo aad tiir adag oo aan laga waaqsan ku tigtigtay. Habalaha waxaan u layliyaynaa inay noqdaan macsuumiin marka afka gacanta laga galiyo aan dhareer mooyee ku qaniinin. Si taas ka duwan ragga waxaa la barayaa oo lagu ababiyaa inay bahallo geesiyo ah noqdaan.
Bulshooyinka qaabkan loo tababaraa maaha kuwa guulaysta ee marar badan waa ay guuldarraystaan. Macallimad Maria Catherine ayaa waxay ardayda ay u dhigaysay u dhiibtay laylis adag oo ay la anfariireen adaygiisa. Dabcan macallimaddu waxay doonaysay inay ogaato ardaydeeda sida kalsoonidoodu u kala duwanatahay wiilasha iyo xaawalayda. Amakaag iyo fool cusub ayaa uga soo baxay shirrabkii ay ugu talogashay ardaydeeda. Hablihii ugu (IQ) maskaxda badnaa waa ay isdhiibeen halka wiilashii ay la sii rafanayeen oo waliba ay tamar iyo muquunin isku dayayeen. Marar badan ayay ku celceliyeen tijaabadii loo dhiibay, way labajibbaareen dadaalka. Maxaa ka socda meeshan? Ardaydan oo ahaa fasalka shanaad hablaha ayaa ku wacnaa maaddooyinka badankooda, xataa xisaabaadka iyo sayniska. Halkan waxaan ka arki karnaa inayna ahayn awoodda waxbarasho ama garaad ee kala reebaysa ragga iyo dumarka. Farqiga u dhexeeya hablaha iyo inamada waa habka ay u waajahayaan caqabadaha.
QORMO LA XIRIIRTA: Xaqdarro
Arrinkani kaliya kuma koobna ardayda dugsiyada hoose dhexe ee waa tijaabooyin soconaya ilaa marka shaqooyinka la raadsanayo, wiilasha waxaa la ogaaday haddii aqoontoodu tahay 60% waxay bilaabaan inay shaqooyin raadsadaan halka gabdhaha ilaa ay shahaadooyin 100% ah ay hesho aanay hawaysan shaqadoon iyo dhiiranaan badan oo caqabadaha nolosha ku socdaan. Waa caddaymo dhab ah oo la ogaaday arimahani.
Hadaba dumarku maxay u baahanyihiin? Waxay u baahanyihiin dhiirigalin iyo kalsoonida oo loo dhiso. Hablaha waa in lagu dhiirrigaliyaa inay bulshaawiyiin noqdaan, oo ay dhiggooda Labka la tartamaan. Waa in loo sheegaa inayna macsuumiin ahayn waligeedna dadku qaladaadka nolosha la kacaakufi doonaan oo tusaale; haddii magaalada Hargaysa lagu qabanayo Tababaro feedhka, iyo orodka iyo shaqooyinka la xiniyeeyay, waa inay ku dhiirradaan inay ka qaybgalaan oo waliba hoggaamiyaan haddii ay jecel yihiin ka qaybgalkooda. Haddiise ay ka gaabsadaan wax walba iyaga oo ka cabsanaya inay jaraan xadadka ay jeexeen bulshada maangaabnimada iyo dumar nacaybku saldhigatay waxa imanaysa in waddanku u curyaamo dhinac walba maadaama ay dumarka matalaan kalabar bulshada.
W/Q: Aadan Xuseen 10th February 2019